နိုင်​ငံ​တော်​၏ အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဟားဗတ်မိန့်ခွန်း – Amara News
ဒီဆုကို ကျမဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအတွက် အသိအမှတ်ပြုပြီးပေးတာလို့ရော၊ အနာဂတ်မှာ ကျမတို့ ရအောင်ကြံဆောင်ရမယ့်အရာတွေအတွက် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းအဖြစ်ပါ ကျမ သဘောထားပါတယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်မှုရော၊ လုံခြုံမှုရော ရှိနေပြီလို့ ပြောနိုင်တဲ့အထိရောက်ဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးလို့ပါ။ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းကို မျှမျှတတရဖို့ ဆိုတာ ဘဝမှာ လူတွေ အတောင့်တဆုံးအရာတွေပါဘဲ။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျမဒီလိုလာနိုင်အောင် အခွင့်အရေးပေးခဲ့ကြတဲ့ လူကြီးမင်းတွေရော၊ ကျမကို ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့သူတွေရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။
”ပညာရေးဆိုတာ တခြားလူတွေရဲ့ စိတ်တွေကို နားလည်ဖို့ လုပ်တာဘဲ” လို့ မိန့်ခွန်းအစပိုင်းမှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ Khurana ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမစိတ်ထဲ သိပ်ကို ထိသွားစေတဲ့စကားပါဘဲ။
စာဖတ်တာကို ကျမသဘောကျရတာကလည်း ဒါကြောင့်ပါဘဲ။ စာဖတ်ခြင်းက တခြားလူတွေရဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာ စူးစမ်းလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။
စာရေးဆရာရဲ့ စိတ်ကူးကိုတင် ဖတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ စိတ်တွေကို စူးစမ်းလို့ရတယ် ။ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္တုဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ၀တ္တုမဟုတ်တာမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မဟုတ်တဲ့လူတွေအကြောင်းကို အများကြီး လေ့လာလို့ရပါတယ် ။
(ဒေါက်တာ Khurana ဒီလိုပြောတာကို နားထောင်ခွင့်ရတာက) ဒီဆုရဲ့ အကောင်းဆုံးအပိုင်းပါဘဲ ……. အဆိုးဆုံးအပိုင်းကတော့ ကျမမိန့်ခွန်းပြောရတာပါဘဲ (ရယ်သံများ)။
ကျမက မိန့်ခွန်းတွေ ပြောရတာ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘဲ လူတွေက ကျမကို မေးကြရော…..( မကြိုက်ဘူး ဆိုပြီး ) တနိုင်ငံလုံးမှာရော နိုင်ငံခြားမှာပါ မိန့်ခွန်းပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့တယ်နော်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ကျမက လူထုကို စကားပြောတဲ့အခါတိုင်း လူတွေ သောင်းနဲ့ သိန်းနဲ့ ချီနေပါစေ သူတို့ကို မိန့်ခွန်းခြွေနေတယ်လို့ ကျမ မခံစားရပါဘူး ၊ သူတို့နဲ့ အတူတကွ စကားပြောနေတယ် လို့ ခံစားရပါတယ် ၊ ဘာလို့လည်းဆို သူတို့နဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံလို့ရတယ်၊ ကျမ ပြောတဲ့အကြောင်းအရာအပေါ် သူတို့ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို မြင်ရတယ်။
ပြီးတော့ လူထုကို စကားပြောပြီးတိုင်း သူတို့မေးချင်တာတွေမေးလို့ရအောင်လည်း အမြဲကြိုးစားပေးပါတယ်။ ဒါမှလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်လို့ရအောင်ပါ။
ဒါပေမယ့် အခုလိုနေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ့်အခမ်းအနားနဲ့ပြောရတဲ့အခါကျရင်တော့ ပရိသတ်နဲ့တကယ်ထိတွေ့နေရတယ်လို့ မခံစားရပါဘူး ။
ဒါမျိုးက ကျမအတွက်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စကားပြောနေတဲ့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒိုင်ယာလော့ဆိုတာက ကိုယ်ပြောချင်တာကို တစ်ဦးချင်းစီပြောနေတာမျိုးထက် ပိုတဲ့အရာပါဘဲ ။
အမေရိကန်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ထဲအလုပ်လုပ်ရင် ရတဲ့ခံစားခွင့်တစ်ခုက ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာ (talking point) ကို ကိုယ့်ရုံးက အဆင်သင့်ရေးပေးတယ်လို့ ကျမ သိရပါတယ် (ရယ်သံများ)။
ဒါဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ဘာမှတောင် လုပ်စရာမလိုဘူး ပေါ့။ ရေးပေးတာကို အသင့်ဖတ်ရုံဘဲ တဲ့။ ဒီ (talking point) တွေကို ဖတ်တိုင်း ကျမ စဉ်းစားမိတယ် ….
ဒါက ကျမပုံစံမှ မဟုတ်တာဘဲ၊ ကျမက သူများပြောခိုင်းတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး … လို့ပါဘဲ။ ဒီတော့လည်း အဲဒီ လှလှပပ talking points ဆိုတာတွေကို ကျမကတော့ များသောအားဖြင့် လျှစ်လျူရှုလိုက်တာပါဘဲ။
ကျမ ဘာအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတာကို ဟားဗတ်ကလည်း ကြိုပြောထားသေးတယ်…..အဲဒါ မင်းတို့ သိကြသလား (ရယ်သံများ)။ တကယ်တမ်းပြောရရင် အဲလိုပြောပြထားတော့ ကျမက ကြိုက်တောင် ကြိုက်ပါသေးတယ်၊ ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကို သိပ်တွေးစရာတောင် မလိုတော့ဘူးလေ (ရယ်သံများ)။
ကျမအနေနဲ့- ” ယဉ်ကျေးမှုမတူသူ ၊ လူမျိုးမတူသူ၊ နောက်ခံသမိုင်းမတူသူ၊ ကိုးကွယ်ရာ မတူသူအချင်းချင်းကြားက ငြိမ်းချမ်းရေးကို တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံ” ကို ပြောရမယ်ဆိုဘဲ ….. ရှုည်လျားလိုက်တဲ့ အမိန့်ပါလား (ရယ်သံများ)။
ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်တော့ အခုအချိန်ဟာ ဒီအကြောင်းတွေကို ပြောဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါဘဲ။ ခုနက ပြောတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအချင်းချင်းကြားက၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားကနဲ့၊ နိုင်ငံတွေကြားက ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေပေါ့လေ….. ။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒါတွေက တကယ်ဘဲ ကျမတို့ရအောင် ကြိုးပမ်းနေတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လို့ပါဘဲ ။ ဒါနဲ့ ဒီနေ့ ကျမရဲ့ နိုင်ငံအကြောင်းပြောကြတော့ တချို့က မြန်မာလို့ ပြောကြတယ် ၊ တချို့က ဘားမား လို့ ပြောကြတာ ကျမ ချက်ချင်းသတိထားမိပါတယ် ။
ကျမတို့ ပြသနာတွေက အဲဒီက စတာပါဘဲ ……ကိုယ့်နိုင်ငံကို ဘယ်လိုခေါ်ရမယ်ဆိုတာတောင် ကျမတို့တတွေ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြဘူး (ရယ်သံများ) ။
၁၉၄၈ မှာ ကျမတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီး ”Union of Burma” ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ကျမတို့လည်း သိပ်ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာပေါ့။ ကျမက အဲဒီတုန်းက အသက် ၂ နှစ်ခွဲဘဲ ရှိသေးတော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပတာတွေကိုတော့ မမှတ်မိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ကျမက လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဂုဏ်ယူတဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့ Union of Burma ဆိုပြီး ဖြစ်လာမှုအပေါ် ပီတိဖြာနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ ကျမအတွက် Burma ဆိုတဲ့နာမည်က လှပတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါဘဲ။ ကျမတို့ ဘာသာစကားနဲ့ ခေါ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။
ဗမာစကားနဲ့တော့ အခုခေါ်သလို မြန်မာနိုင်ငံလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလို့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နာမည်တွင်သွားရတဲ့ အကြောင်းကတော့ Burma ဆိုတာ ဗြိတိန်ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့ ထွင်လုံးတစ်ခုလို့ စစ်အစိုးရက သတ်မှတ်လိုက်လို့ပါဘဲ …..Burma ဆိုတာကို မသုံးသင့်ဘူးဆိုပြီး မြန်မာလို့ ခေါ်ခိုင်းခဲ့တယ်၊
မြန်မာဆိုတာ ကျမတို့နိုင်ငံထဲက တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ Burma ဆိုတာက ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဘဲ ရည်ညွှန်းတယ်လို့လည်း စစ်အစိုးရက ရှင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက တကယ်တော့ မမှန်ပါဘူး။
ဘာလို့ဆိုတော့ ဗမာဆိုတာကို စာသံပေသံအသုံးတွေမှာ မြန်မာလို့ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဗမာဆိုတာကလည်း တကယ်တော့ တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ကျမကတော့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ပြောရဆိုရရင် မြန်မာဆိုတဲ့စကားကို သိပ်ပြီး မကြိုက်လှပါဘူး ။
ဒုတိယအချက်ကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေအဖို့ မြန်မာဆိုတာကို အသံထွက်မှန်အောင် ထွက်ဖို့ ခက်လိုပါဘဲ……Burma ဆိုတာက ခေါ်ရတာ လွယ်ပါတယ် ( ရယ်သံများ ) ။
ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ရကို ရမှ ဖြစ်မှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ကျမတို့အနေနဲ့ မြန်မာဆိုတာကို မသုံးတော့ဘဲ Burma လို့ ပြန်ခေါ်ရမယ် ဆိုပြီး တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်လို့ရပေမယ့် အဲတာမျိုး ကျမတို့လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အာဏာရလာတာနဲ့ ကိုယ့်အလိုကို အာဏာသုံးပြီး လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ ၀ဲဂယက်ထဲကို မကျချင်လုို့ပါဘဲ ။ သူများကို အမိန့်ပေးလို့ရတဲ့နေရာကို ရောက်လာရင် အာဏာကို အလွဲသုံးစားမလုပ်မိဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ် ။
ဒါက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အခြေခံပါဘဲ ။ ကျမတို့လိုချင်တာက အာဏာနဲ့လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှု မဟုတ်ပါဘူး ၊ သင့်မြတ်ရင်ကြားစေ့ရေးပါ ။ ဒါကြောင့်ဘဲ မြန်မာဆိုတာ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်နာမည်အဖြစ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ သုံးဖို့ ကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် Burma လို့ ခေါ်တာကို ပိုကြိုက်လို့ အဲလိုဘဲ ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူရှိရင်လည်း ကျမကတော့ သဘောကျပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ကျမအနေနဲ့ Burma လို့ ပြောရတာကို ကြိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး ရှိပါတယ်။ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေကလည်း မတူကြပါဘူး။ တိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းတာကတော့ ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာ တိုင်းရင်းသားတစ်ဖွဲ့က ပုန်ကန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဗဟိုအစိုးရကို မယုံတဲ့အတွက်ပါ။
ဒီတော့ လွတ်လပ်ရေးလည်းရ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ကျမအမြဲဘဲ ပြောခဲ့ပါတယ်…….ဘာကိုဘဲ ဆုံးရှုံး ဆုံးရှုံး နေလို့ရပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးရင်တော့ အားလုံးဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့အတူတူပါဘဲ။ မျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးသွားရင် ဖြေရှင်းရသိပ်ခက်သွားတတ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားအများကြီး၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာမတူတာတွေအများကြီးရှိတဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက် ကျမ အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်းမှာ အုပ်စုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုတွေ အရင်က မမြင်ဖူးလောက်အောင်အတိုင်းအတာမျိုးနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ ကျမ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ကျမရဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ”ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းခြင်း” မှာ ကျမရေးခဲ့ဖူးပါတယ်……..အကြောက်တရားဟာ သွေးကွဲမှုတွေအားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်ပါဘဲ လို့ပါ။ အကြောက်တရားဟာ အမုန်းတရားကို ဖြစ်စေပါတယ်၊ အမုန်းတရားဟာ မယုံကြည်သွေးကွဲခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အကြောက်တရားမှာ အခြေမခံတဲ့ မုန်းတီးမှု ဆိုတာ မရှိဘူး၊ ရှိရင် သက်သေပြလှည့်ပါ လို့ လူတွေကို ကျမ အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အမုန်းတရားအားလုံးဟာ အကြောက်တရားမှာ တနည်းနည်းနဲ့အခြေခံနေတာပါဘဲ။ ဥပမာရိုးရိုးလေးဘဲ ပေးရရင် ” မြွေကို မုန်းတယ် ” ဆိုတာ မြွေကို ကြောက်လို့ပါဘဲ။
မကြောက်ဘဲ ဘာကြောင့် မုန်းမှာလဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို မုန်းတယ် ဆိုတာလည်း အဲဒီတစ်ယောက်အပေါ်မှာ ကြောက်နေလို့ပါဘဲ ….မဟုတ်ရင် ဘာကြောင့် မုန်းမှာလဲ။ သူက ကိုယ့်ထက် ပညာရေးမှာ သာသွားမှာ စိုးလို့လား။
ဒါမှမဟုတ် သူက ကိုယ့်ရည်းစားကို လုယူသွားမှာ စိုးလို့လား (ရယ်သံများ)၊ ဒီတော့ အမုန်းတရားတိုင်းရဲ့ နောက်မှာ အကြောက်တစ်ခုခုတော့ ရှိပါတယ် ။ ဒီတော့ မုန်းတာကို ဖျောက်ချင်ရင် ကြောက်တာကို ဖျောက်ရမယ်။ မုန်းတာကို မပယ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ယဉ်ကျေးမှုမတူသူ၊ ဘာသာမတူသူတွေ ကြားထဲက ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှင့်တင်ဖို့ဆိုရင် အမုန်းတရားရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောက်တရားကို ပယ်မှ ရမှာပါ။ ဘာကို ကြောက်နေတာလဲ ဆိုတာ သိဖို့ ရိုးသားမှုတော့ လိုပါတယ် …..
သူများနဲ့တင်မကဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပေါ်မှာရော ရိုးသားမှ ရပါမယ်။ ဘာလို့လည်းဆို လူတွေက တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို မုန်းတယ်လို့သာ ပြောကြတာ၊ များသေားအားဖြင်တော့ ဘာလို့ မုန်းတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုကျတော့ အမှန်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်က လက်ခံမယ်ထင်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကိုဘဲ ပေးလေ့ရှိကြတယ်။
ကြားတဲ့သူ ကိုယ့်ဘက်ပါလာနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကို ပြလေ့ရှိကြတယ်။ ”ဒီလူ့ကို မင်းမုန်းတာ မင်းမှန်တယ်” လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လက်ခံလာအောင် လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အုပ်စုလိုက်တွေပါ ပါလာတော့တာဘဲ။ အုပ်စုတစ်ခုကို မုန်းချင်ရင် မုန်းဖို့အကြောင်းပြချက်ဆိုတာကတော့ ရှာလို့ရနေတာပါဘဲ ။
ဒါက ကိုယ်နဲ့ဘဲ ဆိုင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်အကြောက်တရားကို အမုန်းတရားဖြစ်လာအောင် ကိုယ်ကဘဲ ဖန်တီးခွင့်ပေးလိုက်လို့ပါဘဲ ။ ဒီတော့ ဒါကို ပျောက်ဖို့ နည်းက မရှုပ်ထွေးမခက်ခဲပါဘူး ၊ ကိုယ့်အကြောက်တရားကို ကျော်နိုင်အောင်လုပ်ပါ….
ဒါဆိုရင် လူတွေကိုမုန်းတာဖြစ်ဖြစ် ၊ အဖွဲ့အစည်းကို မုန်းတာဖြစ်ဖြစ် ၊ အိုင်ဒီယာတွေကို မုန်းတာဖြစ်ဖြစ် ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မုန်းတာဖြစ်ဖြစ် မုန်းနေတာတွေကို လျှော့နိုင်လာပါလိမ် ။ ဒါမှ ညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထူထောင်နိုင်မှာပါ ။
”မတူကွဲပြားခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညီညွတ်မှု” အကြောင်းကို ကျမတို့အမြဲပြောလေ့ရှိကြတယ် ။ ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေအတွက် ကျမ သိပ်ဂုဏ်ယူပါတယ် …
ဒါပေမယ့် ဒါကို ကျမတို့အားလုံးအတွက် အင်အားတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး ၊ ဒါတွေအတွက် အတူတကွ ဂုဏ်ယူစွာပျော်ရွှင်နေရတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး ။ ကျမတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှ မယုံကြဘဲလေ ။
မကြာသေးခင်ကဘဲ ကျမတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် ။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ရင်ကြားစေ့ပြေလည်စေဖို့ပါ ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်လာကြတဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို ညှိနှိုင်းပေးဖို့၊ အပြစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မှာ လက်နက်ထိုးခိုင်းဖို့ဆိုတာ သိပ်ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စပါဘဲ ။
ဘာကြောင့်သူတို့ လက်နက်မဖြုတ်သိမ်းချင်ကြတာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ ၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ကာကွယ်ဖို့ ၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ လက်နက်လိုတယ်လို့ ယုံကြည်ကြလို့ပါဘဲ ။
ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ထိပါးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အာဏာရှိသူတွေကို မယုံလို့ပါဘဲ ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ အကြောက်တရားကလာတာတွေပါဘဲ ။
ဒါပေမယ့် ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတာထက် ”ဘာကြောင့်ကိုယ့်ကို သူများက ကြောက်နေအောင် လုပ်ရတာလဲ” ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ပိုတောင် ဆိုးပါသေးတယ် ။ သူများက ကိုယ့်ကို ကြောက်နေတာကိုမှ ဂုဏ်ယူနေသူတွေကို ကျမတွေ့ဖူးပါတယ် ။
အဲဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာလို့ သူတို့က ထင်နေကြတယ် ။ ကျမကတော့ ဒါကို ရှက်စရာလို့ ထင်ပါတယ် ။ သူများက ကိုယ့်ကို ကြောက်နေတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ ။ ဒါက ကိုယ့်မှာ မမှန်တာတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုတာ ပြတာပါဘဲ…..
ကိုယ်ဟာ မျှတသင့်သလောက် မမျှတဘူး ၊ ရက်ရောသင့်သလောက် မရက်ရောဘူး ။ သူများတွေရဲ့ အမြင်တွေအပေါ်မှာ နားလည်သင့်သလောက်နားမလည်ဘူး ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် သင့်တော်သလို မချုပ်တည်းနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါဘဲ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မချုပ်တည်းနိုင်တဲ့ သူတွေကို လူတွေက အမြဲကြောက်လန့်နေတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီလူတွေ ဘာထလုပ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူးလို့ပါဘဲ ။
ဒီတော့ သူများက ကိုယ့်ကို ကြောက်နေတာဟာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေကျတော့လည်း ” အရမ်းလေးစားတယ် ” ဆိုတာမျိုး ရှိပါတယ် ၊ ဒါက နည်းနည်းတော့ နားထောင်လို့ ကောင်းပါသေးတယ် ။
အဲလို အရမ်းလေးစားတယ် ဆိုပြီး ရိုးရိုးသားသားပြောတာ ခံစားမိတာကတော့ ကြောက်တာနဲ့မတူပါဘူး ။ ဒါက တဖက်သားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ ဉာဏ်ပညာ ၊ စိတ်ဓါတ် ၊ ဥစ္စာပစ္စည်း စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရိုးရိုးသားသား လေးစားမိတဲ့ သဘောပါပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြောက်နေရတာနဲ့ ကိုယ့်ကို ကြောက်အောင် လုပ်ထားတာဟာ နှစ်ခုစလုံး မကောင်းပါဘူး ။
ဒီတော့ တိုင်းရင်းသားတွေကြား ၊ မတူတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ဆိုတာ အကြောက်တရားကို အမြစ်ဖြတ်ပစ်မှ ဖြစ်မှာပါဘဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်ရမလဲ ။ ကျမမှာ အဖြေအသင့်ရှိရင် ကျမတို့တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလှရောပေါ့ ။
ကျမမှာ အဖြေအားလုံး မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကောင်းတဲ့အချက်လေးတော့ တစ်ခုစီရှိတယ်ဆိုတာကို အမြဲလက်ခံပြီး အစပြုလို့တော့ ရပါတယ် ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ရှိတဲ့ ဒီကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးရဲ့အကျိုးအတွက် အသုံးချလို့ရပါတယ် ဆိုတာကို လက်ခံပြီး အစပြုလို့ရပါတယ် ။
ဒီအချက်ကို လက်ခံယုံကြည်ရင် အကြောက်တရားဟာ လျော့ပါးလာပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို မကြောက်ဘဲ မုန်းလို့မှ မရတာ ။ ကျမနဲ့ လာပြောဖို့ ကျမ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်….ကိုယ့်ကိုယ်ကို စမ်းစစ်ကြည့်ပါ ။ ဘာကို မုန်းနေသလဲ ။ ဘယ်သူ့ကို မုန်းနေသလဲ ။ အဲဒီမုန်းတဲ့စိတ်ရဲ့အောက်ခြေမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်က တကယ်မရှိတာလား ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးပြီး ရိုးရိုးသားသား ဖြေကြည့်ပါ ။ ”ကျနော် ကျမကဖြင့် အဲဒီလူကို မုန်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် လုံးဝတော့ မကြောက်ပါဘူး ” လို့ဆိုရင် ကျမကို လာပြောလှည့်ပါ ။ သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာ….ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ ယုံမယ် မထင်ပါဘူး ……
ကျမလက်ခံအောင် ပြောဖို့တော့ လွယ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော် ၊ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ ( ရယ်သံများ ) ။ ကျမတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးမှာ နေကြတာပါ ၊ ဒီတော့ လူမျိုးမတူသူတွေ ၊ ဘာသာမတူသူတွေနဲ့ မနေဘူးဆိုပြီး ရှောင်လို့မရပါဘူး ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျမ လည်ပတ်ကြည့်ရှုရတော့ ကျမရဲ့တိုင်းပြည်ထက် ရော ၊ ကျမရောက်ဖူးတဲ့ တိုင်းပြည်တချို့ထက်ရော သိပ်ကို ချမ်းသာကြွယ်ဝတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ ဘာလုပ်ကြသလဲ ၊ ဘာလို့ ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာချင်နေကြသလဲ ။
ပိုပိုပြီးများပြားတဲ့ ဥစ္စာဓနအင်အားကို ရအောင်လုပ်နေတဲ့ တွန်းအားက ဘာလို့ရှိနေတာလဲ ။ ကျမတော့ နားမလည်ပါဘူး ။ လူဆိုတာ တနေ့ကို အစား ဘယ်နှစ်နပ်စားနိုင်လို့လဲ ( ရယ်သံများ ) ။ ကျမတို့ နိုင်ငံ သိပ်ကို ကျပ်တည်းတဲ့ ကာလမှာ လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အမြတ်ထုတ်တဲ့လူတချို့ ရှိခဲ့တယ် ၊
သူတို့တတွေ ကားတွေတစ်စီးပြီးတစ်စီး ၊ အိမ်တွေ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် ပွားအောင် လုပ်ကြတာမြင်တော့ ကျမ သိပ်အံ့သြတာပါဘဲ ။ တစ်ကြိမ်မှာ ကားတစ်စီးဘဲ စီးလို့ရတယ် ၊ ဆပ်ကပ်ပြပွဲထဲမှာဆိုရင်တော့ တစ်ခါတည်းနဲ့ မြင်းနှစ်ကောင်စီးတာမျိုး ရှိချင်ရှိမှာပေါ့ ။
ကားကျတော့ တစ်ကြိမ်မှာ နှစ်ကားဆိုပြီး စီးလို့ရတာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး ( ရယ်သံများ ) ။ အိမ်ဆိုလည်း တစ်ကြိမ်မှာ တစ်အိမ်ဘဲ နေလို့ရတယ် ။ တစ်အိမ်ကတစ်အိမ် ကူးလို့ရပေမယ့် ဒါက ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာ ကျမ သေချာပြောနိုင်ပါတယ် ၊
အခု ကျမဆို ရန်ကုန်အိမ်ကနေ နေပြည်တော်အိမ်ကို ကူးနေရတယ်…..အိမ်နှစ်အိမ်ကို စီမံခန့်ခွဲရတာ တကယ်ဘဲ စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ် ။ အိမ်တွေ ဆယ်အိမ် ၊ ဆယ့်တစ်အိမ် ၊ ဆယ့်နှစ်အိမ်ရှိတဲ့လူတွေ ဘယ်လိုများ စီမံနေကြပါလိမ့် ။ တချို့များ သူတို့မှာ အိမ်ဘယ်နှစ်အိမ်ရှိလဲဆိုတာ မှတ်တောင် မမှတ်မိဘူး လို့ ပြောကြတယ် ။
ဒီတော့ ပစ္စည်းဥစ္စကို ပိုပိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတာ ဘာလို့လဲ ။ လုံခြုံမှုအတွက်လား ။ သူများထက်ပိုသာတယ်လို့ သက်သေပြချင်တာလား ။ ကျမဖြင့် တကယ်နားမလည်နိုင်အောင်ပါဘဲ ။
ဒီတော့ ဒီနေ့ ကျမ မေးခဲ့တဲ့
-ဘာလို့ ပိုပိုပြီး လိုချင်နေကြတာလဲ ၊ ပိုပိုပြီးချမ်းသာချင်နေကြတာလဲ……..
ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရရင် လူမျိုးမတူသူ ၊ ဘာသာမတူတွေကြား ၊ ဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်စေမယ့်အဖြေတော်တော်များများကို ရပြီးဖြစ်မှာပါဘဲ ၊
အဲဒီအဖြေတွေကိုရရင် လူသားတွေအချင်ချင်းကြားက ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပါ နားလည်လာပါလိမ့်မယ် ။ ကျမက လူသားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိပါတယ် ၊ တကယ်လို့သာ ကျမတို့လူသားတွေမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကလေးတွေ မပါလာဘူး ဆိုရင်
အခုအချိန်ထိ ဂူတွေထဲဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တင်းပုတ်တွေ ၊ ဒုတ်တွေနဲ့ထုရိုက်နေတုန်း ရှိဦးမှာပေါ့။ အခု အဲလိုမျိုးလုပ်မနေကြဘူးဆိုတာ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ တိုးတက်လာမှုကို ပြတာပါဘဲ ။ ဒီတော့ လူသားတွေရဲ့ရှေ့ကို တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာ ကျမကတော့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
ဒါက ကျမအတွက်တော့ ”လူမျိုးမတူသူတွေကြား ၊ ယဉ်ကျေးမှုမတူသူတွေကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကို တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းပါဘဲ ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဟာ ဒီလို မတူညီတဲ့နောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေ အများကြီး စုဝေးရာ ၀န်းကျင်ပါဘဲ ။
ဒီတော့ အားလုံးပူးပေါင်းအဖြေရှာကြပါစို့ ၊ အဖြေရရင်လည်း ကိုယ့်အတန်းသူအတန်းသားတွေကို ပြောလိုက်ကြပါဦး ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီလိုမိန့်ခွန်းတိုတိုလေးတစ်ခုအတွင်းမှာ ကျမအနေနဲ့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ရာ မတတ်နိုင်လို့ပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ( ရယ်သံ ၊ လက်ခုပ်သံများ )
Translated By Spring Flowers
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ၏ ဟားဗတျမိနျ့ခှနျး
ဒီဆုကို ကမြဆောငျရှကျခဲ့တာတှအေတှကျ အသိအမှတျပွုပွီးပေးတာလို့ရော၊ အနာဂတျမှာ ကမြတို့ ရအောငျကွံဆောငျရမယျ့အရာတှအေတှကျ အတိတျနိမိတျကောငျးအဖွဈပါ ကမြ သဘောထားပါတယျ။
ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ကမြတို့ ပွညျသူတှေ လှတျလပျမှုရော၊ လုံခွုံမှုရော ရှိနပွေီလို့ ပွောနိုငျတဲ့အထိရောကျဖို့ အဝေးကွီးလိုသေးလို့ပါ။ လှတျလပျခွငျးနဲ့လုံခွုံခွငျးကို မြှမြှတတရဖို့ ဆိုတာ ဘဝမှာ လူတှေ အတောငျ့တဆုံးအရာတှပေါဘဲ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ ကမြဒီလိုလာနိုငျအောငျ အခှငျ့အရေးပေးခဲ့ကွတဲ့ လူကွီးမငျးတှရေော၊ ကမြကို ခြီးကြူးပွောဆိုခဲ့သူတှရေော အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါရစေ။
”ပညာရေးဆိုတာ တခွားလူတှရေဲ့ စိတျတှကေို နားလညျဖို့ လုပျတာဘဲ” လို့ မိနျ့ခှနျးအစပိုငျးမှာ ပွောခဲ့တဲ့ ဒေါကျတာ Khurana ကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ကမြစိတျထဲ သိပျကို ထိသှားစတေဲ့စကားပါဘဲ။
စာဖတျတာကို ကမြသဘောကရြတာကလညျး ဒါကွောငျ့ပါဘဲ။ စာဖတျခွငျးက တခွားလူတှရေဲ့စိတျတှဘေယျလိုရှိသလဲဆိုတာ စူးစမျးလလေ့ာဖို့အခှငျ့အရေးပေးပါတယျ။
စာရေးဆရာရဲ့ စိတျကူးကိုတငျ ဖတျလို့ရတာမဟုတျဘဲ ဇာတျကောငျတှရေဲ့ စိတျတှကေို စူးစမျးလို့ရတယျ ။ စိတျကူးယဉျဝတ်တုဘဲဖွဈဖွဈ ၊ ဝတ်တုမဟုတျတာမှာဘဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျမဟုတျတဲ့လူတှအေကွောငျးကို အမြားကွီး လလေ့ာလို့ရပါတယျ ။
(ဒေါကျတာ Khurana ဒီလိုပွောတာကို နားထောငျခှငျ့ရတာက) ဒီဆုရဲ့ အကောငျးဆုံးအပိုငျးပါဘဲ ……. အဆိုးဆုံးအပိုငျးကတော့ ကမြမိနျ့ခှနျးပွောရတာပါဘဲ (ရယျသံမြား)။
ကမြက မိနျ့ခှနျးတှေ ပွောရတာ မကွိုကျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ဘဲ လူတှကေ ကမြကို မေးကွရော…..( မကွိုကျဘူး ဆိုပွီး ) တနိုငျငံလုံးမှာရော နိုငျငံခွားမှာပါ မိနျ့ခှနျးပေါငျးမြားစှာ ပွောခဲ့တယျနျောတဲ့။
ဒါပမေယျ့ ကမြက လူထုကို စကားပွောတဲ့အခါတိုငျး လူတှေ သောငျးနဲ့ သိနျးနဲ့ ခြီနပေါစေ သူတို့ကို မိနျ့ခှနျးခွှနေတေယျလို့ ကမြ မခံစားရပါဘူး ၊ သူတို့နဲ့ အတူတကှ စကားပွောနတေယျ လို့ ခံစားရပါတယျ ၊ ဘာလို့လညျးဆို သူတို့နဲ့မကျြလုံးခငျြးဆုံလို့ရတယျ၊ ကမြ ပွောတဲ့အကွောငျးအရာအပျေါ သူတို့ဘယျလိုခံစားရတယျဆိုတာကို မွငျရတယျ။
ပွီးတော့ လူထုကို စကားပွောပွီးတိုငျး သူတို့မေးခငျြတာတှမေေးလို့ရအောငျလညျး အမွဲကွိုးစားပေးပါတယျ။ ဒါမှလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျနားလညျလို့ရအောငျပါ။
ဒါပမေယျ့ အခုလိုနရောမြိုးမဟုတျဘဲ တကယျ့အခမျးအနားနဲ့ပွောရတဲ့အခါကရြငျတော့ ပရိသတျနဲ့တကယျထိတှနေ့ရေတယျလို့ မခံစားရပါဘူး ။
ဒါမြိုးက ကမြအတှကျတော့ နှဈဦးနှဈဖကျစကားပွောနတေဲ့ ပုံစံမြိုး မဟုတျပါဘူး ။ ဒိုငျယာလော့ဆိုတာက ကိုယျပွောခငျြတာကို တဈဦးခငျြးစီပွောနတောမြိုးထကျ ပိုတဲ့အရာပါဘဲ ။
အမရေိကနျမှာ အစိုးရအဖှဲ့ထဲအလုပျလုပျရငျ ရတဲ့ခံစားခှငျ့တဈခုက ပွောရမယျ့အကွောငျးအရာ (talking point) ကို ကိုယျ့ရုံးက အဆငျသငျ့ရေးပေးတယျလို့ ကမြ သိရပါတယျ (ရယျသံမြား)။
ဒါဆိုရငျ ကိုယျတိုငျ ဘာမှတောငျ လုပျစရာမလိုဘူး ပေါ့။ ရေးပေးတာကို အသငျ့ဖတျရုံဘဲ တဲ့။ ဒီ (talking point) တှကေို ဖတျတိုငျး ကမြ စဉျးစားမိတယျ ….
ဒါက ကမြပုံစံမှ မဟုတျတာဘဲ၊ ကမြက သူမြားပွောခိုငျးတဲ့ အကွောငျးအရာကို ပွောတဲ့သူ မဟုတျဘူး … လို့ပါဘဲ။ ဒီတော့လညျး အဲဒီ လှလှပပ talking points ဆိုတာတှကေို ကမြကတော့ မြားသောအားဖွငျ့ လြှဈလြူရှုလိုကျတာပါဘဲ။
ကမြ ဘာအကွောငျးပွောရမယျဆိုတာကို ဟားဗတျကလညျး ကွိုပွောထားသေးတယျ…..အဲဒါ မငျးတို့ သိကွသလား (ရယျသံမြား)။ တကယျတမျးပွောရရငျ အဲလိုပွောပွထားတော့ ကမြက ကွိုကျတောငျ ကွိုကျပါသေးတယျ၊ ပွောရမယျ့အကွောငျးအရာကို သိပျတှေးစရာတောငျ မလိုတော့ဘူးလေ (ရယျသံမြား)။
ကမြအနနေဲ့- ” ယဉျကြေးမှုမတူသူ ၊ လူမြိုးမတူသူ၊ နောကျခံသမိုငျးမတူသူ၊ ကိုးကှယျရာ မတူသူအခငျြးခငျြးကွားက ငွိမျးခမျြးရေးကို တိုးတကျအောငျဆောငျရှကျခွငျးရဲ့ အရေးပါပုံ” ကို ပွောရမယျဆိုဘဲ ….. ရှုညျလြားလိုကျတဲ့ အမိနျ့ပါလား (ရယျသံမြား)။
ဒါပမေယျ့လညျး တကယျတော့ အခုအခြိနျဟာ ဒီအကွောငျးတှကေို ပွောဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါဘဲ။ ခုနက ပွောတဲ့ ယဉျကြေးမှုအခငျြးခငျြးကွားက၊ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြးကွားကနဲ့၊ နိုငျငံတှကွေားက ငွိမျးခမျြးရေးအကွောငျးတှပေေါ့လေ….. ။
ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ဒါတှကေ တကယျဘဲ ကမြတို့ရအောငျ ကွိုးပမျးနတေဲ့အရာတှေ ဖွဈလို့ပါဘဲ ။ ဒါနဲ့ ဒီနေ့ ကမြရဲ့ နိုငျငံအကွောငျးပွောကွတော့ တခြို့က မွနျမာလို့ ပွောကွတယျ ၊ တခြို့က ဘားမား လို့ ပွောကွတာ ကမြ ခကျြခငျြးသတိထားမိပါတယျ ။
ကမြတို့ ပွသနာတှကေ အဲဒီက စတာပါဘဲ ……ကိုယျ့နိုငျငံကို ဘယျလိုချေါရမယျဆိုတာတောငျ ကမြတို့တတှေ သဘောထားမတိုကျဆိုငျကွဘူး (ရယျသံမြား) ။
၁၉၄၈ မှာ ကမြတို့နိုငျငံလှတျလပျရေးရပွီး ”Union of Burma” ဆိုပွီး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ ။ ကမြတို့လညျး သိပျဂုဏျယူခဲ့ကွတာပေါ့။ ကမြက အဲဒီတုနျးက အသကျ ၂ နှဈခှဲဘဲ ရှိသေးတော့ လှတျလပျရေးနေ့ အခမျးအနားကငျြးပတာတှကေိုတော့ မမှတျမိပါဘူး ။
ဒါပမေယျ့ ကမြက လှတျလပျရေးအတှကျ ဂုဏျယူတဲ့အငှအေ့သကျတှနေဲ့ Union of Burma ဆိုပွီး ဖွဈလာမှုအပျေါ ပီတိဖွာနတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွီးပွငျးလာခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ ကမြအတှကျ Burma ဆိုတဲ့နာမညျက လှပတဲ့စကားလုံးတဈခုပါဘဲ။ ကမြတို့ ဘာသာစကားနဲ့ ချေါတာတော့ မဟုတျဘူးပေါ့လေ။
ဗမာစကားနဲ့တော့ အခုချေါသလို မွနျမာနိုငျငံလို့ ချေါကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာလို့ ကမ်ဘာ့အလယျမှာ နာမညျတှငျသှားရတဲ့ အကွောငျးကတော့ Burma ဆိုတာ ဗွိတိနျကိုလိုနီအစိုးရရဲ့ ထှငျလုံးတဈခုလို့ စဈအစိုးရက သတျမှတျလိုကျလို့ပါဘဲ …..Burma ဆိုတာကို မသုံးသငျ့ဘူးဆိုပွီး မွနျမာလို့ ချေါခိုငျးခဲ့တယျ၊
မွနျမာဆိုတာ ကမြတို့နိုငျငံထဲက တိုငျးရငျးသားအားလုံးကို ရညျညှနျးပွီး၊ Burma ဆိုတာက ဗမာတိုငျးရငျးသားတှကေိုဘဲ ရညျညှနျးတယျလို့လညျး စဈအစိုးရက ရှငျးခကျြထုတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါက တကယျတော့ မမှနျပါဘူး။
ဘာလို့ဆိုတော့ ဗမာဆိုတာကို စာသံပသေံအသုံးတှမှော မွနျမာလို့ ရေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဗမာဆိုတာကလညျး တကယျတော့ တိုငျးရငျးသား တဈမြိုးပါဘဲ။ ဒါကွောငျ့ ကမြကတော့ နိုငျငံတကာအလယျမှာ ပွောရဆိုရရငျ မွနျမာဆိုတဲ့စကားကို သိပျပွီး မကွိုကျလှပါဘူး ။
ဒုတိယအခကျြကတော့ နိုငျငံခွားသားတှအေဖို့ မွနျမာဆိုတာကို အသံထှကျမှနျအောငျ ထှကျဖို့ ခကျလိုပါဘဲ……Burma ဆိုတာက ချေါရတာ လှယျပါတယျ ( ရယျသံမြား ) ။
ကမြတို့တိုငျးပွညျမှာ အမြိုးသားရငျကွားစရေ့ေး ရကို ရမှ ဖွဈမှာပါ။ အခုအခြိနျမှာ ကမြတို့အနနေဲ့ မွနျမာဆိုတာကို မသုံးတော့ဘဲ Burma လို့ ပွနျချေါရမယျ ဆိုပွီး တရားဝငျသတျမှတျလိုကျလို့ရပမေယျ့ အဲတာမြိုး ကမြတို့လုပျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အာဏာရလာတာနဲ့ ကိုယျ့အလိုကို အာဏာသုံးပွီး လုပျခိုငျးတယျဆိုတဲ့ ဝဲဂယကျထဲကို မကခြငျြလို့ပါဘဲ ။ သူမြားကို အမိနျ့ပေးလို့ရတဲ့နရောကို ရောကျလာရငျ အာဏာကို အလှဲသုံးစားမလုပျမိဖို့က သိပျအရေးကွီးပါတယျ ။
ဒါက အမြိုးသားရငျကွားစရေ့ေးအတှကျ အခွခေံပါဘဲ ။ ကမြတို့လိုခငျြတာက အာဏာနဲ့လှမျးမိုးထိနျးခြုပျမှု မဟုတျပါဘူး ၊ သငျ့မွတျရငျကွားစရေ့ေးပါ ။ ဒါကွောငျ့ဘဲ မွနျမာဆိုတာ ကမြတို့နိုငျငံရဲ့ တရားဝငျနာမညျအဖွဈ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးမှာ သုံးဖို့ ကမြတို့အစိုးရအဖှဲ့က ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ Burma လို့ ချေါတာကို ပိုကွိုကျလို့ အဲလိုဘဲ ချေါခငျြတယျဆိုတဲ့သူရှိရငျလညျး ကမြကတော့ သဘောကပြါတယျ ။ နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ စကားပွောတဲ့အခါ ကမြအနနေဲ့ Burma လို့ ပွောရတာကို ကွိုကျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ တိုငျးရငျးသား ၁၃၅ မြိုး ရှိပါတယျ။ ကိုးကှယျတဲ့ဘာသာတှကေလညျး မတူကွပါဘူး။ တိုငျးပွညျမငွိမျးခမျြးတာကတော့ ၁၉၄၈ လှတျလပျရေးရပွီးကတညျးပါ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ လှတျလပျရေးရပွီးနောကျမှာ တိုငျးရငျးသားတဈဖှဲ့က ပုနျကနျခဲ့ကွပါတယျ။ ဗမာတိုငျးရငျးသားတှအေမြားစုနဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဗဟိုအစိုးရကို မယုံတဲ့အတှကျပါ။
ဒီတော့ လှတျလပျရေးလညျးရ၊ ငွိမျးခမျြးရေးလညျးဆုံးရှုံးတဲ့အဖွဈကို ရောကျခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသှားတဲ့အဖွဈမြိုးတော့ မဟုတျခဲ့ပါဘူး။
ကမြအမွဲဘဲ ပွောခဲ့ပါတယျ…….ဘာကိုဘဲ ဆုံးရှုံး ဆုံးရှုံး နလေို့ရပါသေးတယျ၊ ဒါပမေယျ့ မြှျောလငျ့ခကျြဆုံးရှုံးရငျတော့ အားလုံးဆုံးရှုံးသှားတာနဲ့အတူတူပါဘဲ။ မြှျောလငျ့ခကျြဆုံးရှုံးသှားရငျ ဖွရှေငျးရသိပျခကျသှားတတျပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားအမြားကွီး၊ ကိုးကှယျရာဘာသာမတူတာတှအေမြားကွီးရှိတဲ့ကမြတို့တိုငျးပွညျအတှကျ ကမြ အရမျးဂုဏျယူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈမြားအတှငျးမှာ အုပျစုအခငျြးခငျြးပဋိပက်ခဖွဈပှားမှုတှေ အရငျက မမွငျဖူးလောကျအောငျအတိုငျးအတာမြိုးနဲ့ ဖွဈခဲ့တဲ့အတှကျတော့ ကမြ စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ။
ကမြရဲ့ စာအုပျဖွဈတဲ့ ”ကွောကျရှံ့ခွငျးမှ လှတျကငျးခွငျး” မှာ ကမြရေးခဲ့ဖူးပါတယျ……..အကွောကျတရားဟာ သှေးကှဲမှုတှအေားလုံးရဲ့အရငျးအမွဈပါဘဲ လို့ပါ။ အကွောကျတရားဟာ အမုနျးတရားကို ဖွဈစပေါတယျ၊ အမုနျးတရားဟာ မယုံကွညျသှေးကှဲခွငျးကို ဖွဈစပေါတယျ။
အကွောကျတရားမှာ အခွမေခံတဲ့ မုနျးတီးမှု ဆိုတာ မရှိဘူး၊ ရှိရငျ သကျသပွေလှညျ့ပါ လို့ လူတှကေို ကမြ အမွဲပွောလရှေိ့ပါတယျ။ အမုနျးတရားအားလုံးဟာ အကွောကျတရားမှာ တနညျးနညျးနဲ့အခွခေံနတောပါဘဲ။ ဥပမာရိုးရိုးလေးဘဲ ပေးရရငျ ” မွှကေို မုနျးတယျ ” ဆိုတာ မွှကေို ကွောကျလို့ပါဘဲ။
မကွောကျဘဲ ဘာကွောငျ့ မုနျးမှာလဲ။ တဈယောကျယောကျကို မုနျးတယျ ဆိုတာလညျး အဲဒီတဈယောကျအပျေါမှာ ကွောကျနလေို့ပါဘဲ ….မဟုတျရငျ ဘာကွောငျ့ မုနျးမှာလဲ။ သူက ကိုယျ့ထကျ ပညာရေးမှာ သာသှားမှာ စိုးလို့လား။
ဒါမှမဟုတျ သူက ကိုယျ့ရညျးစားကို လုယူသှားမှာ စိုးလို့လား (ရယျသံမြား)၊ ဒီတော့ အမုနျးတရားတိုငျးရဲ့ နောကျမှာ အကွောကျတဈခုခုတော့ ရှိပါတယျ ။ ဒီတော့ မုနျးတာကို ဖြောကျခငျြရငျ ကွောကျတာကို ဖြောကျရမယျ။ မုနျးတာကို မပယျနိုငျဘဲနဲ့တော့ ဘယျနိုငျငံ၊ ဘယျအသိုငျးအဝိုငျးမှာဘဲဖွဈဖွဈ ငွိမျးခမျြးရေး၊ ရငျကွားစရေ့ေးဆိုတာ ရမှာ မဟုတျပါဘူး။
ယဉျကြေးမှုမတူသူ၊ ဘာသာမတူသူတှေ ကွားထဲက ငွိမျးခမျြးရေးကို မွှငျ့တငျဖို့ဆိုရငျ အမုနျးတရားရဲ့အရငျးအမွဈဖွဈတဲ့အကွောကျတရားကို ပယျမှ ရမှာပါ။ ဘာကို ကွောကျနတောလဲ ဆိုတာ သိဖို့ ရိုးသားမှုတော့ လိုပါတယျ …..
သူမြားနဲ့တငျမကဘဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအပျေါမှာရော ရိုးသားမှ ရပါမယျ။ ဘာလို့လညျးဆို လူတှကေ တဈခုခု၊ တဈယောကျယောကျကို မုနျးတယျလို့သာ ပွောကွတာ၊ မြားသေားအားဖွငျတော့ ဘာလို့ မုနျးတာလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးကိုကတြော့ အမှနျမပွောတတျကွပါဘူး။ ပတျဝနျးကငျြက လကျခံမယျထငျရတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတဈခုခုကိုဘဲ ပေးလရှေိ့ကွတယျ။
ကွားတဲ့သူ ကိုယျ့ဘကျပါလာနိုငျတဲ့အကွောငျးတဈခုခုကို ပွလရှေိ့ကွတယျ။ ”ဒီလူ့ကို မငျးမုနျးတာ မငျးမှနျတယျ” လို့ ပတျဝနျးကငျြက လကျခံလာအောငျ လုပျတတျကွတယျ။ ဒီလိုနဲ့ အုပျစုလိုကျတှပေါ ပါလာတော့တာဘဲ။ အုပျစုတဈခုကို မုနျးခငျြရငျ မုနျးဖို့အကွောငျးပွခကျြဆိုတာကတော့ ရှာလို့ရနတောပါဘဲ ။
ဒါက ကိုယျနဲ့ဘဲ ဆိုငျပါတယျ ။ ကိုယျ့အကွောကျတရားကို အမုနျးတရားဖွဈလာအောငျ ကိုယျကဘဲ ဖနျတီးခှငျ့ပေးလိုကျလို့ပါဘဲ ။ ဒီတော့ ဒါကို ပြောကျဖို့ နညျးက မရှုပျထှေးမခကျခဲပါဘူး ၊ ကိုယျ့အကွောကျတရားကို ကြျောနိုငျအောငျလုပျပါ….
ဒါဆိုရငျ လူတှကေိုမုနျးတာဖွဈဖွဈ ၊ အဖှဲ့အစညျးကို မုနျးတာဖွဈဖွဈ ၊ အိုငျဒီယာတှကေို မုနျးတာဖွဈဖွဈ ၊ လှုပျရှားမှုတှကေို မုနျးတာဖွဈဖွဈ မုနျးနတောတှကေို လြှော့နိုငျလာပါလိမျ ။ ဒါမှ ညီညှတျငွိမျးခမျြးတဲ့လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို ထူထောငျနိုငျမှာပါ ။
”မတူကှဲပွားခွငျးကနဖွေဈပျေါလာတဲ့ညီညှတျမှု” အကွောငျးကို ကမြတို့အမွဲပွောလရှေိ့ကွတယျ ။ ကမြတို့တိုငျးပွညျရဲ့ မတူကှဲပွားခွားနားမှုတှအေတှကျ ကမြ သိပျဂုဏျယူပါတယျ …
ဒါပမေယျ့ ဒါကို ကမြတို့အားလုံးအတှကျ အငျအားတဈရပျအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျခွငျး မရှိသေးပါဘူး ၊ ဒါတှအေတှကျ အတူတကှ ဂုဏျယူစှာပြျောရှငျနရေတာမြိုး မရှိသေးပါဘူး ။ ကမြတို့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမှ မယုံကွဘဲလေ ။
မကွာသေးခငျကဘဲ ကမြတို့ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲတှကေို ကငျြးပခဲ့ကွပါတယျ ။ ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ လကျနကျစှဲကိုငျတျောလှနျလာတဲ့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့အစညျးတှကေို ရငျကွားစပွေ့လေညျစဖေို့ပါ ။
နှဈပေါငျးမြားစှာ လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲဝငျလာကွတဲ့ ဒီအဖှဲ့အစညျးတှကေို ညှိနှိုငျးပေးဖို့၊ အပွဈအခတျရပျစဲရေးစာခြုပျမှာ လကျနကျထိုးခိုငျးဖို့ဆိုတာ သိပျခကျခဲတဲ့ ကိစ်စပါဘဲ ။
ဘာကွောငျ့သူတို့ လကျနကျမဖွုတျသိမျးခငျြကွတာလဲဆိုတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျကာကှယျဖို့ ၊ ကိုယျ့လူမြိုးကို ကိုယျကာကှယျဖို့ ၊ ကိုယျယုံကွညျရာကို ကာကှယျဖို့ ၊ ကိုယျ့အကြိုးစီးပှာတှကေို ကာကှယျဖို့ လကျနကျလိုတယျလို့ ယုံကွညျကွလို့ပါဘဲ ။
ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ရဲ့လုံခွုံမှုနဲ့ လှတျလပျမှုကို ထိပါးအောငျလုပျနိုငျတဲ့အာဏာရှိသူတှကေို မယုံလို့ပါဘဲ ။ ဒါတှအေားလုံးဟာ အကွောကျတရားကလာတာတှပေါဘဲ ။
ဒါပမေယျ့ ဘာလို့ကွောကျတာလဲဆိုတာထကျ ”ဘာကွောငျ့ကိုယျ့ကို သူမြားက ကွောကျနအေောငျ လုပျရတာလဲ” ဆိုတဲ့ ကိစ်စကတော့ ပိုတောငျ ဆိုးပါသေးတယျ ။ သူမြားက ကိုယျ့ကို ကွောကျနတောကိုမှ ဂုဏျယူနသေူတှကေို ကမြတှဖေူ့းပါတယျ ။
အဲဒါဟာ ဂုဏျယူစရာလို့ သူတို့က ထငျနကွေတယျ ။ ကမြကတော့ ဒါကို ရှကျစရာလို့ ထငျပါတယျ ။ သူမြားက ကိုယျ့ကို ကွောကျနတေယျဆိုတာ ရှကျစရာကောငျးတဲ့ကိစ်စပါ ။ ဒါက ကိုယျ့မှာ မမှနျတာတဈခုခုရှိနပွေီဆိုတာ ပွတာပါဘဲ…..
ကိုယျဟာ မြှတသငျ့သလောကျ မမြှတဘူး ၊ ရကျရောသငျ့သလောကျ မရကျရောဘူး ။ သူမြားတှရေဲ့ အမွငျတှအေပျေါမှာ နားလညျသငျ့သလောကျနားမလညျဘူး ၊ မိမိကိုယျကိုယျ သငျ့တျောသလို မခြုပျတညျးနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါဘဲ ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မခြုပျတညျးနိုငျတဲ့ သူတှကေို လူတှကေ အမွဲကွောကျလနျ့နတေတျကွပါတယျ ။ ဒီလူတှေ ဘာထလုပျမယျဆိုတာ ဘယျသူမှ မသိနိုငျဘူးလို့ပါဘဲ ။
ဒီတော့ သူမြားက ကိုယျ့ကို ကွောကျနတောဟာ ဂုဏျယူစရာမဟုတျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ တခါတလကေတြော့လညျး ” အရမျးလေးစားတယျ ” ဆိုတာမြိုး ရှိပါတယျ ၊ ဒါက နညျးနညျးတော့ နားထောငျလို့ ကောငျးပါသေးတယျ ။
အဲလို အရမျးလေးစားတယျ ဆိုပွီး ရိုးရိုးသားသားပွောတာ ခံစားမိတာကတော့ ကွောကျတာနဲ့မတူပါဘူး ။ ဒါက တဖကျသားရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ ၊ ဉာဏျပညာ ၊ စိတျဓါတျ ၊ ဥစ်စာပစ်စညျး စတာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ရိုးရိုးသားသား လေးစားမိတဲ့ သဘောပါပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျယောကျကို ကွောကျနရေတာနဲ့ ကိုယျ့ကို ကွောကျအောငျ လုပျထားတာဟာ နှဈခုစလုံး မကောငျးပါဘူး ။
ဒီတော့ တိုငျးရငျးသားတှကွေား ၊ မတူတဲ့ ယဉျကြေးမှုတှကွေား ငွိမျးခမျြးရေး ရဖို့ဆိုတာ အကွောကျတရားကို အမွဈဖွတျပဈမှ ဖွဈမှာပါဘဲ ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကို ဘယျလို အကောငျအထညျဖျောရမလဲ ။ ကမြမှာ အဖွအေသငျ့ရှိရငျ ကမြတို့တိုငျးပွညျ ငွိမျးခမျြးနတော နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာလှရောပေါ့ ။
ကမြမှာ အဖွအေားလုံး မရှိပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ လူတိုငျးတဈယောကျခငျြးစီမှာ ကောငျးတဲ့အခကျြလေးတော့ တဈခုစီရှိတယျဆိုတာကို အမွဲလကျခံပွီး အစပွုလို့တော့ ရပါတယျ ၊ လူတဈဦးခငျြးစီမှာ ရှိတဲ့ ဒီကောငျးတဲ့အခကျြလေးတှကေို ရှာဖှဖေျောထုတျပွီး လူသားမြိုးနှယျတဈရပျလုံးရဲ့အကြိုးအတှကျ အသုံးခလြို့ရပါတယျ ဆိုတာကို လကျခံပွီး အစပွုလို့ရပါတယျ ။
ဒီအခကျြကို လကျခံယုံကွညျရငျ အကွောကျတရားဟာ လြော့ပါးလာပါတယျ ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ တဈယောကျယောကျကို မကွောကျဘဲ မုနျးလို့မှ မရတာ ။ ကမြနဲ့ လာပွောဖို့ ကမြ ဖိတျချေါပါတယျ….ကိုယျ့ကိုယျကို စမျးစဈကွညျ့ပါ ။ ဘာကို မုနျးနသေလဲ ။ ဘယျသူ့ကို မုနျးနသေလဲ ။ အဲဒီမုနျးတဲ့စိတျရဲ့အောကျခွမှော ကွောကျတဲ့စိတျက တကယျမရှိတာလား ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မေးပွီး ရိုးရိုးသားသား ဖွကွေညျ့ပါ ။ ”ကနြျော ကမြကဖွငျ့ အဲဒီလူကို မုနျးပါတယျ ၊ ဒါပမေယျ့ လုံးဝတော့ မကွောကျပါဘူး ” လို့ဆိုရငျ ကမြကို လာပွောလှညျ့ပါ ။ သိပျကို စိတျဝငျစားစရာကောငျးမှာ….ဒါပမေယျ့ ကမြကတော့ ယုံမယျ မထငျပါဘူး ……
ကမြလကျခံအောငျ ပွောဖို့တော့ လှယျမှာ မဟုတျဘူးနျော ၊ ကွိုးစားကွညျ့ပေါ့ ( ရယျသံမြား ) ။ ကမြတို့ဟာ ကမ်ဘာ့ရှာကွီးမှာ နကွေတာပါ ၊ ဒီတော့ လူမြိုးမတူသူတှေ ၊ ဘာသာမတူသူတှနေဲ့ မနဘေူးဆိုပွီး ရှောငျလို့မရပါဘူး ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုကို ကမြ လညျပတျကွညျ့ရှုရတော့ ကမြရဲ့တိုငျးပွညျထကျ ရော ၊ ကမြရောကျဖူးတဲ့ တိုငျးပွညျတခြို့ထကျရော သိပျကို ခမျြးသာကွှယျဝတာကို တှရေ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီခမျြးသာကွှယျဝမှုတှနေဲ့ ဘာလုပျကွသလဲ ၊ ဘာလို့ ခမျြးသာပွီးရငျး ခမျြးသာခငျြနကွေသလဲ ။
ပိုပိုပွီးမြားပွားတဲ့ ဥစ်စာဓနအငျအားကို ရအောငျလုပျနတေဲ့ တှနျးအားက ဘာလို့ရှိနတောလဲ ။ ကမြတော့ နားမလညျပါဘူး ။ လူဆိုတာ တနကေို့ အစား ဘယျနှဈနပျစားနိုငျလို့လဲ ( ရယျသံမြား ) ။ ကမြတို့ နိုငျငံ သိပျကို ကပျြတညျးတဲ့ ကာလမှာ လူတှေ ဒုက်ခရောကျနတောကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး အမွတျထုတျတဲ့လူတခြို့ ရှိခဲ့တယျ ၊
သူတို့တတှေ ကားတှတေဈစီးပွီးတဈစီး ၊ အိမျတှေ တဈအိမျပွီးတဈအိမျ ပှားအောငျ လုပျကွတာမွငျတော့ ကမြ သိပျအံ့သွတာပါဘဲ ။ တဈကွိမျမှာ ကားတဈစီးဘဲ စီးလို့ရတယျ ၊ ဆပျကပျပွပှဲထဲမှာဆိုရငျတော့ တဈခါတညျးနဲ့ မွငျးနှဈကောငျစီးတာမြိုး ရှိခငျြရှိမှာပေါ့ ။
ကားကတြော့ တဈကွိမျမှာ နှဈကားဆိုပွီး စီးလို့ရတာမြိုးလညျး မဟုတျဘူး ( ရယျသံမြား ) ။ အိမျဆိုလညျး တဈကွိမျမှာ တဈအိမျဘဲ နလေို့ရတယျ ။ တဈအိမျကတဈအိမျ ကူးလို့ရပမေယျ့ ဒါက ဘာမှ အကြိုးမရှိဘူးဆိုတာ ကမြ သခြောပွောနိုငျပါတယျ ၊
အခု ကမြဆို ရနျကုနျအိမျကနေ နပွေညျတျောအိမျကို ကူးနရေတယျ…..အိမျနှဈအိမျကို စီမံခနျ့ခှဲရတာ တကယျဘဲ စိတျပကျြစရာကောငျးပါတယျ ။ အိမျတှေ ဆယျအိမျ ၊ ဆယျ့တဈအိမျ ၊ ဆယျ့နှဈအိမျရှိတဲ့လူတှေ ဘယျလိုမြား စီမံနကွေပါလိမျ့ ။ တခြို့မြား သူတို့မှာ အိမျဘယျနှဈအိမျရှိလဲဆိုတာ မှတျတောငျ မမှတျမိဘူး လို့ ပွောကွတယျ ။
ဒီတော့ ပစ်စညျးဥစ်စကို ပိုပိုလိုခငျြတဲ့ဆန်ဒရှိနတော ဘာလို့လဲ ။ လုံခွုံမှုအတှကျလား ။ သူမြားထကျပိုသာတယျလို့ သကျသပွေခငျြတာလား ။ ကမြဖွငျ့ တကယျနားမလညျနိုငျအောငျပါဘဲ ။
ဒီတော့ ဒီနေ့ ကမြ မေးခဲ့တဲ့
-ဘာလို့ ပိုပိုပွီး လိုခငျြနကွေတာလဲ ၊ ပိုပိုပွီးခမျြးသာခငျြနကွေတာလဲ……..
ဒီမေးခှနျးတှရေဲ့အဖွကေိုရရငျ လူမြိုးမတူသူ ၊ ဘာသာမတူတှကွေား ၊ ဆကျဆံရေးတှတေိုးတကျစမေယျ့အဖွတေျောတျောမြားမြားကို ရပွီးဖွဈမှာပါဘဲ ၊
အဲဒီအဖွတှေကေိုရရငျ လူသားတှအေခငျြခငျြးကွားက ဆကျဆံရေး ဘယျလိုတိုးတကျအောငျလုပျမလဲဆိုတာကိုပါ နားလညျလာပါလိမျ့မယျ ။ ကမြက လူသားဆိုတဲ့အပျေါမှာ ယုံကွညျမှုရှိပါတယျ ၊ တကယျလို့သာ ကမြတို့လူသားတှမှော အပွုသဘောဆောငျတဲ့ စိတျဓါတျကလေးတှေ မပါလာဘူး ဆိုရငျ
အခုအခြိနျထိ ဂူတှထေဲဘဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တငျးပုတျတှေ ၊ ဒုတျတှနေဲ့ထုရိုကျနတေုနျး ရှိဦးမှာပေါ့။ အခု အဲလိုမြိုးလုပျမနကွေဘူးဆိုတာ လူသားမြိုးနှယျရဲ့ တိုးတကျလာမှုကို ပွတာပါဘဲ ။ ဒီတော့ လူသားတှရေဲ့ရှကေို့ တိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျစှမျးအပျေါမှာ ကမြကတော့ ယုံကွညျပါတယျ ။
ဒါက ကမြအတှကျတော့ ”လူမြိုးမတူသူတှကွေား ၊ ယဉျကြေးမှုမတူသူတှကွေား ငွိမျးခမျြးရေးကို တိုးတကျအောငျ လုပျလို့ရမယျ့ နညျးလမျးပါဘဲ ။ ဟားဗတျတက်ကသိုလျဟာ ဒီလို မတူညီတဲ့နောကျခံအသိုငျးအဝိုငျးကလူတှေ အမြားကွီး စုဝေးရာ ဝနျးကငျြပါဘဲ ။
ဒီတော့ အားလုံးပူးပေါငျးအဖွရှောကွပါစို့ ၊ အဖွရေရငျလညျး ကိုယျ့အတနျးသူအတနျးသားတှကေို ပွောလိုကျကွပါဦး ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ဒီလိုမိနျ့ခှနျးတိုတိုလေးတဈခုအတှငျးမှာ ကမြအနနေဲ့ ဆှေးနှေးအဖွရှောဖို့ရာ မတတျနိုငျလို့ပါ ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ( ရယျသံ ၊ လကျခုပျသံမြား )
Previous Article မိုးလေးရွာပြီးပြီးချင်း မြွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်လိုက်ကိုက်နေတဲ့(ရုပ်/သံ)
Next Article “ သား ဖိနပ် မပျောက်တော့ဘူး ဖေကြီး(နောက်ဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးဝေးပါစေ သားလေးရယ်) ”